Ịwụnye Windows 11 na PC na -ekwekọghị ekwe pụtara melite mmelite | Akụkọ Windows
Ntuziaka na ndụmọdụ
Nnukwu nlekọta! Nke a bụ ihe na -eme ma ọ bụrụ na ị nwaa ịwụnye Windows 11 na kọmputa akwadoghị
Dị ka ị maraworị, n'oge na -adịghị anya gara aga Microsoft wepụtara Windows 11 na ọtụtụ ihe ọhụrụ maka otu niile. Agbanyeghị, n'oge na -adịghị anya ọkụ ọkụ ahụ malitere ịwụli na netwọkụ mmekọrịta, n'ihi na nwụnye chọrọ Sistemu eji arụ ọrụ siri ike karịa ka a tụrụ anya ya, na -amanye inwe mgbawa TPM 2.0 nke ọtụtụ kọmputa anaghị ejikọ.
N'ezie, enwere ọtụtụ mgbochi na akụkụ Microsoft nke ahụ ọbụnadị na ihu ihu gị niile adabaghị. Na, iburu nke a n'uche, Ọtụtụ ụzọ amalitelarị ịpụta na netwọkụ niile nke ọ ga -ekwe omume ịgabiga ihe ndị a ma wụnye Windows 11 na kọmpụta na -emezughị ihe a chọrọ. Ọ dị mkpa iji hụ na nchekwa nke sistemụ arụmọrụ. Agbanyeghị, ọ dị ka ọ ga -enwe nsonaazụ siri ike.
Ọ bụrụ na ị rụnyere Windows 11 na -emezughị ihe achọrọ na kọmputa gị, kelee nkwalite niile
Dịka anyị kwuru, agbanyeghị na -atụ anya mmelite n'obere nwụnye chọrọ, ma ọ bụ mpụta nke ụdị ọhụrụ maka kọmpụta ochie, ọ nweghị nke a mere. N'ụzọ megidere nke ahụ, site na ndị otu Microsoft, ha enwechala ihe gbasara ya yana, dịka ọ dị ugbu a gosi na webụsaịtị ha, ndị ọrụ na -etinye Windows 11 na ngwaọrụ anaghị akwado agaghị enwe ike irite uru na mmelite.
Nwelite na Windows 11: ndakọrịta, ọnụahịa, na ihe niile anyị maara ruo ugbu a
N'ụzọ dị otú a, na mgbakwunye na enweghị ike ịnweta mmelite nchekwa, na -ahapụ kọmputa ka ekpughere ọghọm ọhụụ na egwu dị oke egwu nke nwere ike ibilite na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ, ha agaghị ahụkwa atụmatụ ma ọ bụ mbipụta ọhụrụ nke Windows 11 wepụtara na Microsoft mgbe mbata nke sistemụ arụmọrụ sistemụ.
N'ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na kọmputa gị enweghị mgbawa TPM 2.0, yabụ, ọ dabara na Windows 11 ọhụrụ, ikekwe ọ ka mma na ị ga -eji ya Windows 10 na ya kama ịnwa ịwụnye ụdị ọhụrụ ahụ. Yabụ, opekata mpe ị ga -enwe ruo 2025 Mmelite nchekwa echekwara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Windows News » Sistemụ arụmọrụ » Windows 11 » Nnukwu nlekọta! Nke a bụ ihe na -eme ma ọ bụrụ na ị nwaa ịwụnye Windows 11 na kọmputa akwadoghị
Ịzụlite Ngwọta Software na Horizon Oasis
Kedu ihe dị iche n'etiti eserese eserese na imebe weebụ?
Nweta akụkọ Windows kachasị ọhụrụ na email gị